Nzọụkwụ iji mee ihe nrite maka Motherbọchị Ndị Nne | Crafts Na
Irene Gil | | Crafts, Ọrụ nka, Ọrụ aka maka ụbọchị nne, Crafts maka ụmụaka, Oge pụrụ iche
Na nke a nkuzi Ana m akuziri gị ka ị kee ihe akwụkwọ nrite, zuru oke ime ụmụaka. Ugbu a na Ụbọchị nne Ha nwere ike hazie ha ka ha nye nne ha ọ bụla. Ha nwere ike inye ya aha ma ọ bụ ahịrịokwu, ma jiri agba ọ bụla ha chọrọ.
Ime ha ihe nrite maka Ụbọchị nne ị ga-achọ ihe ndị a ihe:
Acha agba ma ọ bụ cardstock
Ji achọ teepu
Ka anyị malite site na ịmepụta ihe okirikiri nke ihe nrite. Iji mee nke a, ị ga-egbutu a yipụ akwụkwọ ahụ ma ọ bụ kaadiboodu nke agba ị họọrọ. Obosara na-adabere na nnukwu ị chọrọ ka nrite gị bụrụ. Na ogologo ga-dịkarịa ala 50cm. Ọ bụrụ na akwụkwọ gị adịghị ogologo oge ị nwere ike ịme ibe abụọ, echegbula onwe gị, anyị ga-ejikọta ha ọnụ. Kwesịrị ịpịkọta ibe akwụkwọ ahụ ka a ga - asị na ha bụ a udoon. Otu mpịakọta n'otu akụkụ, otu na nke ọzọ, na na ruo ọgwụgwụ.
Ghichaa otu njedebe na njedebe nke ọzọ a gburugburu, dị ka a ga-asị na ọ bụ ụdị uwe mwụda. Mgbe ị nwere ya otu ahụ, kpoo ya n'etiti, ị ga-ahụ na ọ na-agbapụta na enwere okirikiri na nkwekọrịta udo.
Ugbu a ka anyị mee etiti gburugburu. Bee a gburugburu nke kaadiboodu pere mpe karịa nkwekọrịta nke ị mere. Debe ya n'etiti. Iji tinye ihe ịchọ mma ị nwere ike ịdebe eserese n'akụkụ ọnụ.
Oge ijide ribbons eji achọ mma. Bee osisi abụọ ma hichaa ha n'ụdị V nọchiri anya azụ. Ha ga-ada. Kpaa njedebe maka imecha mara mma.
N'ikpeazụ, dee na etiti ahụ mensaje ma ọ bụ nombre ihe Ị chọrọ.
Ma ị ga-enwe nke gị ihe nrite ahaziri iji nye ma ọ bụ icho mma. Have nwere ọtụtụ puku atụmatụ dị iche iche nwere ọtụtụ agba dị iche iche nke akwụkwọ, rịbọn na ihe nrịbama.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Crafts Na » Crafts » Nzọụkwụ iji mee ihe nrite maka Motherbọchị Ndị Nne
Otu esi eme achicha metụ akwa maka ịsa ahụ nwa ma ọ bụ onyinye nwa.
Otu esi eme ka ite nke udo di n 'uzo di mfe ma di mfe.